ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ “ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ” စတိုင် | AAS Burmese
by အောငျအောငျ November 12, 2017 494 views
(ဓါတ်ပုံ- Myanmar State Counsellor Office)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဩဇာတိက္ကမ အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၀ မှစ၍ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက လိုအပ်နေသည့်အရာမှာ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး” ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်လာခဲ့သည်။ သူမကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာချိန်တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်ကထက် အဆ ၁၀၀လောက် ဆိုးဝါးလာသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းများနှင့် ဗလီများကို ကျူးကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ကိစ္စ၊ ငါးလောင်းပြိုင် လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဦးကိုနီ အကြမ်းဖက် လုပ်ကြံခံခဲ့ရမှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုများတို့မှာ နိုဘယ်လ်ဆုရှင်လက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံသည် မင်းမဲ့စရိုက် တိုင်းပြည်ဖြစ်နေကြောင်း ထင်ရှားနေသည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူနှင့် အစိုးရတို့မှာ တိုင်းပြည်၏ စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ စည်းကမ်းများနှင့် နည်းဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင်ငံကြီးသား ပီသလိုစိတ်ရှိနေကြသည်။ လူမျိုးဘာသာပေါ် အခြေခံသည့် အမျိုးသားရေးထက် တရားမျှတမှုကို ဦးစားပေးကြသည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိသည့် နိုင်ငံများတွင်မူ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအကျိုးအတွက် အသုံးချခြင်း၊ ဘာသာရေးအရည်ခြုံ များက အမျိုးသားရေးအတွက် ကြွေးကြော်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားများက မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် တိုင်းပြည်၏ ဥပဒေပြုအာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပြည်သူများကို မတရားနှိပ်စက်ခြင်း စသည့် မင်းမဲ့စရိုက်များရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
၁၉၈၈မှစ၍ စစ်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် စတင်သုံးလာခဲ့သည်။ လမ်းတိုင်းတွင် ဓမ္မာရုံများဆောက်ပေးပြီး သူတောင်းစားဦးရေ တိုးပွားလာအောင် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်စရိုက်များအား ကိုယ်စားပြုသည့် ဘာသာရေး အရည်ခြုံများကို နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ကိုယ်တိုင် ကြည်ညိုလေးစားလျက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသဖွယ် နေရာပေးမြှောက်စားလာခဲ့သည်။
၈.၁၁.၂၀၁၇ နေ့ ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၏ “အမျိုးသားရေး လက်မနှေးခဲ့သူပါ ” ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်းအရာများကို အသေအချာဖတ်ကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုံးဝ မရှိကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်။ အရည်ခြုံ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်က “NLD အစိုးရက ဝီရသူထံ သင်ယူစရာများစွာရှိ” ဟန်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရက သံဃာတော်တစ်ပါးအား ထိုသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါသလား။ တရားဥပဒေက ထိုသို့ ပြောဆိုရေးသားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပါသလား။
အကယ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် တရားဥပဒေက ထိုသို့ ခွင့်ပြုထားခြင်း မဟုတ်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်သည့် ပြည်သူများက အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုထားပါသနည်း။ တိုင်းပြည်ကို မင်းမဲ့စရိုက် တိုင်းပြည်ဖြစ်လို၍လော။ မီဒီယာများနှင့် ပညာရှင်များက အဘယ်ကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေကြသနည်း။ ဝီရသူကို ကြည်ညိုလေးစား၍လော၊ ဝီရသူအား ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် စစ်အာဏာရှင်များကို ကြောက်၍လော။
အနောက်သား အဝကျွန်းသား ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များက တရုတ်ကြီးကို အားကိုး၍ စစ်အာဏာရှင်အလိုကျ လုပ်နေသည်မှာ ၂၀၁၀မှ ယနေ့အထိ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် တရုတ်ကြီး၏စီမံကိန်း အားလုံးအနက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တရုတ်ပိုင်စီမံကိန်းများမှာ အရေးအပါဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့် ရခိုင်အတွက်မျှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခဲ့ပေ။ တရုတ်၏ ရင်းနှီးမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံထက် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှာ ပိုများသည်ကို သိပါလျက် တရုတ်ကြီးကို အားကိုးနေသည့် ငတုံးများလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် များစွာရှိကြသည်။
ရခိုင်အရေးက မြန်မာနိုင်ငံအား မင်းမဲ့စရိုက် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာသိအောင် ပုံဖော်ပေးခဲ့ပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအား “ဘင်္ဂလီ” “ရိုဟင်ဂျာ” မသုံးပါနှင့်၊ ထိုစကားအသုံးအနှုံးများမှာ ထိလွယ်ရှလွယ်ပြီး ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် မသုံးနှုံးကြရန် တောင်းဆိုပါလျက် နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာများ၌ “ဘင်္ဂလီ” ဟု ဖော်ပြနေခြင်းသည် မင်းမဲ့စရိုက်ကို ပုံဖော်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုံးဝ မရှိကြောင်းကို သက်သေထူနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာများကို မတော်မတရား မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ခြင်း၊ နိုင်ငံသားများဖြစ်ပါလျက် ဥပဒေမှာမရှိသည့် NVC ကဒ် အတင်းအဓမ္မယူစေခြင်း စသည်တို့မှာ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ခံရမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရလက်ထက် မင်းမဲ့စရိုက်များပင် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တရားဥပေဒေ စိုးမိုးရေး လုံးဝ မရှိသည့်အတွက် ကမန်တိုင်းရင်းသားများသည်ပင် ၂၀၁၂ မှ ယနေ့အထိ ကျောင်းတက်ခွင့်၊ ဆေးဝါးကုသခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိကြပေ။
ရိုဟင်ဂျာတို့အား ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီဟု ဝါဒဖြန့်ပြီး သုတ်သင်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ NVC ကို ဂျီနိုဆိုဒ်၏ နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာဆယ် မရလောက်အောင် အခြေအနေ ဆိုးဝါးနေသည်။
Myanmar’s State Policy forces thousands of Myanmar people including #Rohingya to leave the country. Increasing numb… https://t.co/DYhc6qlb6f
I have studied Buddhist Scriptures but I could find only mitta not hatred. I don't know who taught hatred and bias… https://t.co/hLjZAMnzDh
To @kyawhsanhlaing1 Please spend some times to read all my articles. https://t.co/cRJnSbdNym… https://t.co/TtwDqbWN9j
To @kyawhsanhlaing1 I have been appealing the whole World to save us from the ghettos since 2012. If you areareal… https://t.co/jjjn0jlyQu
ဒေါကျတာမောငျဇာနညျ (သို့မဟုတျ) မွနျမာ့ မာတငျလူသာကငျးဂြူနီယာ